ငွေလဲနှုန်း၊ IMF နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေး အရှုပ်ထုပ် | ဧရာဝတီ
ရဲနည်| October 21, 2011 | Hits:636
| | မြန်မာ့ငွေကြေး လဲလှယ်နှုန်းထား ပြင်ဆင်ရေး အကူအညီပေးဖို့ ကမ္ဘာ့ငွေကြေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်တွေမြန်မာပြည်ကိုလာပြီး ဆွေးနွေးနေကြပြီလို့ သိရပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တခုအတွင်း ကျပ်ငွေများ ရေတွက်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - REUTERS)
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> ကိုလေး October 21, 2011 - 5:24 pm	ဒီမိုကရေစီ ခေတ်မှာ အာဏာကို ဘယ်သူမှ ချုပ်ကိုင်ထားလို့ မရတော့ပါဘူး။
ဘယ်သူပဲ အုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ် ကောင်းတာကို ၀ိုင်းဝန်း ထာက်ခံ ချီးမွမ်းကြပြီး မှားနေတာကို တွေ့ရင်လည်း ၀ိုင်းပြီး ပြုပြင် ကူညီပေးကြမယ် ဆိုရင် တို့တိုင်းပြည်ကြီး အရင်ကထက် ပိုကောင်းလာမယ် ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။
အစိုးရကလည်း ဖမ်းထားသူတွေ လွတ်ပေးပြီး တိုင်းပြည်အတွက် အားလုံးက အပြုသဘောဆောင် ၀ိုင်းလုပ်ကြရမယ် ဆိုရင် တို့တိုင်းပြည် ကြီးပွားတိုးတက်လာမယ် ဆိုတာ မလွဲပါပဲ။
Reply	ghost rider October 22, 2011 - 6:32 pm	ကိုလေးရယ်၊ ကိုလေးကတော့ ယုံကြည်ချက်မြင့်မားပုံရတယ်၊ ကိုလေးပြောတဲ့ အမှန်တရားက လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းနဲ့ အကိုက်ညီဆုံး ၊ အပြုသဘောအဆောင်ဆုံးပါဘဲလို့။
Reply	ပေါ်ဦး October 21, 2011 - 5:35 pm	သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာထင်သာမြင်သာရှိမှုကို 100% ထုတ်ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်တော့အမေရိကန်က ဗီတိုအာဏာကိုထိန်းသိမ်းထားမယ်လို့ထင်ပါတယ်..
Reply	ပေါ်ဦး October 21, 2011 - 5:45 pm	ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကိုမြန်မာ့သယံဇာတတွေကရတဲ့ဒေါ်လာတွေနဲ့ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုလို့.. အဲ့ဒီဒေါ်လာတွေကစစ်အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီး လုပ်စားထားတဲ့ဘူစွာတွေလက်ထဲမှာနော်..ဒီကောင်တွေမှာတောမီးလောင်တောကောင်ချနင်း တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပဲကိန်းအောင်းနေတာကခက်တယ်..
Reply	ghost rider October 22, 2011 - 6:26 pm	ကိုပေါ်ကြီးက ကိုပေါကြီးစကားသိပ်ပြောတယ်နော်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တအားမှန်တယ်ထင်ယင် မှန်ထောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော့်အထင် ကိုပေါကြီး ယုံကြည်ချက်မရှိဘူးထင်တာဘဲ။
Reply	pps12345 October 22, 2011 - 5:06 pm	ငွေလဲနှူန်း၆ကျပ်နှင့်လုပ်စားနေကြတဲ့ကိုစိုးသိန်းတို့ ကိုအောင်သောင်းတို့မိသားစုတွေနှင့် သူတို့တပည့်တွေ နားလည်နိုင်ကြပါစေကွယ်။
Reply	anonymous October 23, 2011 - 7:20 pm	မေးချင်တာကတော့ဒီမိုကရေစီခေတ်ကြီးရောက်နေပြီလားခင်ဗျာ…ဘယ်သူအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်လို့ပြောတာစစ်တပ်ကလူဝတ်လဲအုပ်ချုပ်တာကိုပြောတာလားခင်ဗျာ…နသိလို့နော်ကိုလေး….ပလာတာလေးချန်ထားတယ်ညီလေး….
Reply	Maung Bamar October 24, 2011 - 3:38 am	ပြည်သူများရဲ့တစ်စိုက်မတ်မတ် တောင်းဆိုဆန္ဒပြမှု များအပြင် international community နဲ့ ကုလသမဂ ရဲ့ အရေးယူမှုများကြောင့် မလုပ်ချင့်လုပ်ချင်နဲ့ လေးဖင့်စွာပြုလုပ်နေတဲ့ အာဏာရှင်အစိုးရကဆင်းသက်လာတဲ့ လူတစ်ယောက် အုပ်ချုပ်နေလို့ကတော့ တိုင်းပြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်ရောက်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ မရှိပါဘူး
Reply	Michael Lynn April 8, 2012 - 7:45 am	Extreme right facts & figures!
Just Name sake only!!!
Reply	ကိုရဲ October 24, 2011 - 1:10 pm	ငွေစက္ကူက ပြောင်းလို့မရသေးဘူးလား
ဓါတ်ပုံသို့မဟုတ် တခုခုပေါ့နော် အခုကတော့
တိရိစ္ဆာန် စတိုင်နဲ့ ပုံဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံ
ဘယ်လိုယူဆရမလဲ ဆိုတာ ပြောကြပါဦး
Reply	မြင့်မောင် October 24, 2011 - 4:09 pm	ကိုရဲ..ပြောတါကြိုက်တယ်…ငါတို့ဗိုလ်ချုပ်ကတုံးကြီးနဲပုံဆိုလည်းငါအကြိုက်ဆုံးဘဲ…ခုတောဘာကေါင် တွေပုံတွေထည်ထါးမှန်း..ဘါအဓိယ်မှန်းမသိတောဘူး…သန်းရွှေစေါက်ရုး..လုပ်ထားတါ……..
Reply	kst October 27, 2011 - 4:34 pm	ပဒေသရဇ်အရှုးလုပ်သွားတာလေ၊အမျိုသားခေါင်းဆောင်ပုံဖျက်၊ပုံပြင်ထဲကတိရစ်ဆန်ပုံထုက်၊စောက်ရှုးဗျာ၊မြန်မာပြည်မှာသမိုင်းမော်ကွန်းတင်ပုဂ်ဂိုလ်တွေအများကြီးပါ၊အနော်ရထာကျန်စစ်သား၊ဘုရင်နောင်၊အလောင်ဘုရားထုက်ရပါတယ်၊အဖပုံကိုသမိုင်းမှာဖျောက်ချင်လဲပြောတာပါ၊ဒီလိုဖျောက်တိုင်းပြည်သူနှလုံးသားထဲကပျောက်မယ်ထင်ခဲ့တာစောက်ရှုးက။
Reply	ps October 27, 2011 - 9:26 pm	u go and do and see.
Reply	VAKOK November 2, 2011 - 10:05 pm	its too early to giveagood comment..this is justastarting.. we are not sure fait or what? it is may beafirst step of thounsands steps or itsaGoddam faith..of bitch,..i think Ko lay you don’t know yet the constitution of our goverments..and by hte way you are not lay phyu right,,,,……………. hah aaaa
Reply	zaw kind April 4, 2012 - 6:02 pm	အမြန်လုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စတခုကတော့ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှည်လျားလှတဲ့ အဆင့်တွေကို လျှော့ချပြီး ကုန်စည်စီးဆင်းမှု မြန်ဆန်ရေးပါဘဲ… မလိုအပ်တဲ့ အဆင့်တွေ အများကြီးလျှော့ချသင့်ပါတယ်…
Reply	zaw kind April 4, 2012 - 6:05 pm	တနေ့ကဗမာပြည်ကပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အ၀င်မှာ ဘာမှမမေးဘူး။ အခွန်စာရွက်လဲ မလိုတော့ဘူး။ အပြန်မှာတော့ ခွင့်စာ အ၀င်တုံးက မပေးလို့ ဒီဖေါင်လိုတယ်ဆိုပြီး ရစ်တော့တာပါဘဲ။ စင်္ကာပူပြန်သူ ၄၊၅ယောက်လောက် ရွာလည်သွားတယ်.. နောက်တော့ လိုက်ပို့တဲ့သူကို အာမခံခိုင်းပြီး ပြန်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်… မလိုတာတွေ မလုပ်ပါနဲ့တော့လားဗျာ…